Ciidanka Dowladda oo la wareegtay gacan ku heynta Degmada Guri-ceel - Awdinle Online
Ciidanka Dowladda oo la wareegtay gacan ku heynta Degmada Guri-ceel
November, 03, 2019 (AO) – Gobolka Galguduud maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka taagnaa xiisado colaadeed oo u dhaxeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ururka Ahlu Sunna Waljameeca oo maamula inta badan deegaannada uu gobolku ka kooban yahay.
Warar ka aan ka heleyno degmada Guri-ceel ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta degmada oo horay u aheyd saldhigga ugu weyn ururka Ahlu Sunna Waljameeca.
Dad Goobjoogayaal ah ayaa warbaahinta u sheegay in xalay la maqlay rasaas kooban oo ka dhaceysa gudaha degmada taasoo u dhaxeysay Ciidamada dowladda gudaha u galay degmada iyo kuwa Ahlu Sunna Waljameeca.
Si kastaba ha ahaatee xaalada degmada xiligan ayaa ah mid deggan haddana dhinaca kale waxaa jira cabsi laga qabo dagaal ka dhici kara madaama ururka Ahlu Sunna ku sugan yihiin meel aan ka fogeyn degmada.
Maalintii shalay ayeey aheyd markii duleedka degmada Matabaan uu iska horimaad ku dhaxmaray ciidamada ka tirsan kuwa dowladda oo galbinayay Wasiirka Wasaaradda Arimaha Gudaha ku sii jeeday degmada Matabaan iyo ururka Ahlu Sunna Waljameeca.
Warar sugan la soco awdinle.com
Previous articleTaliye Xigeenkii hore ee NISA oo ka digay Heshiis ay Soomaaliya la gashay Qatar
Next articleWasiirka Warfaafinta DF ayaa Xilalka Qaadey Agaasimayaashii SNTV, Radio Muqdisho iyo Wakaaladd Wararka SONNA